Ny COVID Organics avy any Afrika dia manasitrana Coronavirus ary azo zahana amin'izao tontolo izao
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny COVID Organics avy any Afrika dia manasitrana Coronavirus ary azo zahana amin'izao tontolo izao
Orinasa lehibe eto Madagasikara ny fitsangatsanganana, fizahantany ary Herbs. Ny isan'ny mponina ao amin'ity Nosy Afrikana ity dia olona maherin'ny 26 tapitrisa. Amin'izao fotoana izao dia tsy nisy olona maty tany Coronavirus, ary 85 fotsiny ireo tranga miasa. Ilay firenena dia miorina ao amin'ny Ranomasimbe atsimon'i India fantatra amin'ny toetrany mahavariana, ny morontsiraka ary ny vokatra biolojika.
Tamin'ny volana avrily dia efa nesorin'i Madagascar ny fanidiana any amin'ny tanàna lehibe telo ao amin'ny firenena, ary nanampy fa "fanafody" Malgache ho an'io aretina io dia voasedra tsara. Miorina amin'ny fandinihana ny Ivotoerana Fikarohana momba ny Applied Malagasy ity fanafody ity ary haparitaka manerana an'i Madagasikara maimaimpoana izao. Inona ary no dikan'io fanafody io? Avy amin'ny inona izy io? Ary manao ahoana ny fahombiazany amin'ny ady atao amin'ny Coronavirus?
Ny anaran'ny ahitra dia Umhlonyane (Zulu), Lengana (Sotho), ary Artemisia (Anglisy) ary hita ao an-tokotaninao io. Ka nandritra ny fotoana rehetra dia nahazo fanafody COVID-19 tao an-tranonao ianao, ”hoy ny lahatsoratra Facebook iray avy any Madagascar navoaka tamin'ny 27 aprily.
Artemisia dia ampiasaina amin'ny fanafody nentim-paharazana. Tamin'ny 2012 ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nilaza fa ny fanafody misy ny ravina maina an'ny zavakanto artemisia dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana mitambatra "miaraka amin'ny fanafody antimalarial mandaitra" hitsaboana "tazomoka tsy sarotra".
Fanafody ho an'ny Covid-19 ve ilay artemisia, ilay aretina ateraky ny coronavirus vaovao? Mihevitra izany ny filohan'i Madagasikara.
Madagascar, izay Repoblikan'i Madagasikara ofisialy, ary fantatra taloha amin'ny anarana hoe Repoblika Malagasy, dia firenena nosy any amin'ny Ranomasimbe Indianina, 400 kilaometatra miala ny morontsirak'i Afrika Atsinanana. Amin'ny 592,800 kilometatra toradroa i Madagasikara dia firenena nosy lehibe indrindra manerantany.
I Madagasikara dia firenena manankarena harena voajanahary, ao anatin'izany ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny fitsaboana ao an-trano. Ahitana "COVID Organics" fantatra amin'ny anarana hoe Malgache.
Ny filoham-pirenena Andry Andry Andry tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny FRANCE 24 sy RFI dia niaro ny fampiroboroboany ny fanafody an-trano nampiady hevitra ho an'ny Covid-19 na dia tsy nisy aza ny fitsapana ara-pitsaboana. "Tena mandaitra izany," hoy izy momba ny zava-pisotro ahitra COVID-Organics. Nambaran-dRajoelina fa raha misy firenena eropeana mahita ny vahaolana, dia tsy hisalasala ny olona.
Ny alatsinainy lasa teo dia nanolotra fanafody fanasitranana ny filoha Andry Rajoelina izay nolazainy fa nampiseho valiny nampahery tamin'ny famonoana ilay virus corona. Ny filoha dia nandefa sary avy amin'ny famelabelarana sy ny sarin'ilay antsoiny hoe fanafody "COVID Organics" tao amin'ny pejiny Facebook.
Ny filoham-pirenena Andry Andry Andry tamin'ny alatsinainy teo dia niady tamin'ny tsikera noho ny fampiroboroboana ny "fanafody" namboarina ho an'ny COVID-19, ary nilaza fa manana fihetsika manambany ny Tandrefana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana afrikana
Nampitandrina hatrany ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) fa tsy mbola voasedra ara-pitsaboana ny fanafody. Na izany aza, betsaka ny manamafy fa ny faharetana mararin'ny Coronavirus dia mahatsapa tsara kokoa rehefa afaka 24 ora rehefa omena an'ity fanafody ity. Ny fanafody dia tsy misy poizina, voajanahary ary araka ny fanasitranan'ny filoha ao anatin'ny 7-10 andro.
Nahazo fanaterana an'i Madagasikara i Gambia's Covid-Organics (CVO) amin'ny talata. I Madagasikara dia nandefa ny entana's Filoha Andry Rajoelina, araka ny filazan'ny State State of the Gambia.
Ity ny resadresaka nifanaovany tamin'ny fahitalavitra France 24
"Tsy tokony hatao ambanin-javatra ny mpahay siansa afrikanina," hoy izy tamin'ny France 24 sy Radio France International (RFI).
"Heveriko fa ny olana dia ny (zava-pisotro) dia avy any Afrika ary tsy azon'izy ireo ekena… fa firenena toa an'i Madagasikara… no namorona ity fomba ity hamonjy an'izao tontolo izao," hoy i Rajoelina, izay milaza fa manasitrana ireo marary ao anatin'ny 10 taona ny fampidirana andro.
Ginea ekoatorialy, Guinea-Bissau, Niger, ary Tanzania no efa nitondra ny entan'ireo potion, izay natomboka tamin'ny volana lasa teo.
"Tsy misy firenena na fikambanana hisakana antsika tsy handroso", hoy i Rajoelina ho setrin'ny ahiahy omen'ny OMS.
Nantsoiny hoe "fanafody nentim-paharazana nohatsaraina" io fanafody io, ary nilaza fa tsy fitsapana ara-pitsaboana i Madagasikara fa "fanaraha-maso klinika" mifanaraka amin'ny torolàlana WHO.
Hanokatra ny sisin-taniny i Islandy amin'ny 15 Jona